Nagarik News - नयाँ वर्ष मुड
केही दिनमै हामी नयाँ वर्ष २०७१ मा हुनेछौँ। क्यालेन्डर फेर्ने तरखर गरिरहेका छौँ। नयाँ वर्ष भनेको अर्काे वर्षमात्र होइन, अलिकति नयाँ उत्साह पनि हो, अलिकति नयाँ ऊर्जा पनि हो, अलिकति नयाँ उत्सव पनि हो। हुन त हामी वर्षमा चारपाँच वटा नयाँ वर्ष मनाउँछौँ। तैपनि, विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष हाम्रा लागि खास हुन्छ। वर्षको पहिलो दिन सुखद रह्यो भने सिंगो वर्ष सुखद हुने मान्यता पनि छ। कस्तो छ नेपालीको नयाँ वर्ष मुड? कस्तो रह्यो २०७०? के–के छन् संकल्प र योजना? सजना बरालको खोजीनिती।
पहिलो दिनको संकेत
नेपालीको दैलोमै आइपुगेको छ, नयाँ वर्ष २०७१। यसलाई भित्र्याउने सुरसारमा छन् सबै। 'सेलिब्रेसन'को अर्को माहोल जम्न लागेकोमा सिंगो देश प्रफुल्ल छ। शहर–बजार अझ बढी व्यग्र भई २०७१ साललाई स्वागत गर्न तम्सिएका छन्। आ–आफ्नो गच्छेअनुसार वैशाख १ गतेलाई रंग्याउने तरखरमा छन् उनीहरू। यसै दिनदेखि जीवनलाई नयाँ मोड दिने ध्येय पनि छ कतिपयको। नयाँ वर्षको योजना र प्रणबारे गाउँदेखि शहरसम्मका मानिस सोचविचार गर्दै छन् यतिबेला।
'खै, कसरी पो मनाउने हो नयाँ वर्ष?' ग्रिनल्यान्ड स्कुल, सामाखुसी, काठमाडौँकी एन्जु पुन अलमलमा छिन्, 'अहिलेसम्म केही सोचिसक्या छैन। के गर्ने होला?' उनी साथीभाइले जसो भन्छन्, उसैगरी नयाँ वर्ष मनाउने मुडमा छन्। 'मनाउनु त परिहाल्यो,' उनले भनिन्, 'झन् यसपालि वैशाख ८ गतेसम्म स्कुल छुट्टी छ। यही मौकामा दिल खोलेर सेलिब्रेट गर्नुपर्ला।'
गायक उजन नेम्वाङले भने नयाँ वर्षको दिन ककनीस्थित आफ्नै रिसोर्टमा कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। 'थुप्रै गायकगायिकाले प्रस्तुति दिनेछन्,' उनले भने, 'म पनि गाउँछु। नाचगानको कार्यक्रमपछि साथीभाइसँग बसिन्छ केही बेर।' उनले नयाँ वर्षको दिन विशेष बनाउन कुनै कसर नछोड्ने बताए। 'नयाँ सालको पहिलो दिन रमाइलो गर्नुपर्छ,' उनको मान्यता छ, 'मर्निङ सोज् द डे भन्छन् नि। मर्निङ रमाइलो भयो भने पूरै दिन रमाइलो हुन्छ। म पनि पहिलो दिन धुमधाम मनाएर वर्षै रमाइलो बनाउने धुनमा छु।' वर्षको पहिलो दिनले सिंगो वर्ष राम्रो या नराम्रो हुने, फाप्ने वा नफाप्ने संकेत गर्नेमा थुप्रै नेपाली एकमत छन्। उसो त यसलाई अन्धविश्वास भन्नेहरूको पनि कमी छैन।
ललितपुरको झम्सिखेलस्थित क्लब 'द ब्लू रुम' का डिजे गणेश अधिकारी नयाँ वर्षको दिन क्लबमै व्यस्त हुने बताउँछन्। 'आफू त इन्द्र परियो, स्वर्गमै रमाइन्छ,' उनले ठट्टा गरे, 'आफू पनि नाच्ने हो, अरूलाई पनि नचाउने हो।' गोंगबु, काठमाडौँकी २० वर्षीया संगीता गौचनको सुर पनि नाच्नमै अडिएको छ। हरेक चाडपर्व उनले क्लबमै मनाउने बताइन्। 'क्रिसमस आई क्लबमा मनाइयो,' उनले भनिन्, 'न्यू इयर (जनवरी १) मा पनि त्यहीँ गइयो। पर्सि सोमवार चाहिँ क्लब प्ल्याटिनम जान्छु होला।'
रेडियो कान्तिपुरका आरजे महेश लिम्बूको योजना पनि अरूको भन्दा अलग छैन। उनी दिउँसो एउटा कार्यक्रमको उद्घोषण सकाएर साँझ साथीभाइसँग जुट्दै छन्। 'दिउँसो म्युजिकल प्रोग्रामको एमसी गर्नेछु,' उनले भने, 'त्यता पनि रमाइलै हुन्छ। बेलुका साथीहरूसँग त झनै रमाइलो गरिन्छ।' स–सानो गेट–टुगेदरिङको कार्यक्रम भएकाले खासै पैसा खर्च नहुने उनले बताए। 'धेरै खर्च गर्दिनँ पनि,' उनी हाँस्छन्, 'फेरि, वर्षैभरि खर्च होला।'
विसं २०७० लाई 'अन्माउन' युवा पुस्ताले झैँ तारताम्य मिलाएका छन्, अग्रजले पनि। बालकुमारी हाइयर सेकेन्डरी स्कुलकी शिक्षिका सुजता राई यसपालि सारा इष्टमित्रलाई घरमा डाकेर भोज खुवाउँदै छिन्। 'निम्तो पनि दिइसकेँ,' उनले भनिन्, 'अरू बेला केही गर्न नसके पनि नयाँ वर्षको दिन आफन्तलाई सम्भि्कउँ्क भनेर यस्तो गर्न लागेकी हुँ। भेटघाट, रमाइलो सबैथोक हुन्छ।' त्यसका लागि उनले २० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएकी छन्। 'माछा, मासु, सागपात सबैथोक किन्दा यतिले पनि पुग्दैन,' उनले भनिन्, 'फेरि, हामी राईकहाँ जाँडरक्सी नभई हुन्न। यस्तो महँगी छ। सानै कार्यक्रम गर्दा पनि पैसा त स्वाहा हुन्छ।'
वैशाख १ गते घुम्ने योजना धेरैको हुन्छ। अरू बेला छुट्टी नमिल्नेहरू पनि यही अवसरमा घुमघाम गर्छन्। काठमाडौँ, रातोपुलका खोमबहादुर पन्थी यसपालि सपरिवार पोखरा जाँदै छन्। तीन दिनका लागि उता जान लागेका उनी चाडपर्व चाहिँ पोखरामै मनाउनुपर्छ भन्छन्। 'पोखरामा जति आनन्द कतै आउँदैन,' उनले भने, 'दिमागै ठन्डा हुन्छ।' अरू बेला प्रायः अफिसका स्टाफसँग पोखरा पुग्ने उनी यसपालि श्रीमती र छोराछोरीसँग जाँदै छन्। 'नयाँ वर्ष गज्जब होलाजस्तो छ,' नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत उनले अनुमान गरेका छन्।
छोराछोरी र अभिभावक पुस्तामात्रै होइन, नयाँ वर्ष मनाउन हजुरबा/आमाहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। यसको उदाहरण लाजिम्पाटकी ६१ वर्षीया हरिकला दाहाल हुन्। उनी प्रत्येक वर्षको वैशाख १ मा आफ्ना छोरानाति र छरछिमेकीलाई चकलेट बाँड्छिन्। 'यसपालि पनि बाँड्छु,' दाहालले भनिन्, 'पहिले–पहिले दूध–रोटी ख्वाएर नयाँ वर्ष मनाउँथे। अहिलेका नातिनातिना दूध–रोटी मन पराउँदैनन्। पकाउन पनि सक्दिनँ। रुपैयाँको दुइटा आउने चकलेट किनेर बाँड्छु। सबै खुसी भएर खान्छन्।' आमाको 'स्टाइल' देखेर हरिकलाका छोरा मोहन पनि दंग पर्छन्। उनी भन्छन्, 'बूढी मान्छेले ल्याक्टोफन चकलेटसँगै आशीर्वाद पनि बाँड्नुहुन्छ। नयाँ वर्ष आमाको आशीर्वादबाटै सुरु हुन्छ हाम्रो।'
आफूले आफैँसँग बाचा–कसम खाने बेला पनि मानिन्छ, नयाँ वर्षको पहिलो दिन। खराब आनीबानी त्याग्ने, आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्नेलगायत प्रण गर्छन् मानिसहरू। भक्तपुर, पलासेका रमेशराज महतले आउँदा दिनमा आफू व्यवस्थित हुने र धेरै पैसा कमाएर मनग्गे बचत गर्ने प्रण गरेका छन्। 'पढाइमा पनि ध्यान दिनेछु,' उनले थपे, 'फिल्म धेरै हेर्नेछैन।'
शुक्रवारले फेसबुकमा सोधेको संकल्पसम्बन्धी प्रश्नमा देवु शंकर घिमिरेले मःमः खान छोड्ने बताएका छन्। महँगीका कारण उनले यसो गर्न लागेको खुलाएका छन्। युयुत्शु क्षत्रीले 'शत्रुलाई प्रेम गर्ने कोसिस गर्नेछु' भनी पोस्ट गरेका छन्। निर्मल रेग्मी चाहिँ ०७१ सालमा केटी साथीहरूको सम्पर्कमै नरहने बताउँछन्। सुदीप बिन्दासको प्रण अझै रमाइलो छ। उनी लेख्छन्, '२०७० मा मलाई एउटीले धोका दिई, २०७१ मा म अर्कीलाई धोका दिनेछु।' अञ्जली गुरुङले भने नयाँ वर्षमा पढाइ र जागिर दुवैलाई बराबरी समय दिने कसम खाएकी छिन्।
मोडेल अजित रायमाझी आफ्नो पीर लिने बानी हटाउन खोज्दै छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि नै उनी 'बिन्दास' हुने सोचमा छन्। 'प्रण पनि त्यही हो मेरो,' उनले भने, 'यस्तो भएन, त्यस्तो किन भयो भनेर चिन्ता गर्ने छैन अब। जो होगा सो होगा। बाल दिन्नँ।' विष्णुमति क्याम्पस, कक्षा १२ का सागर मगर सोमवारको दिन छादुन्जेल लोकल तान्ने र अर्को दिनदेखि पूरै सुधि्रने ध्याउन्नमा छन्। 'जिन्दगीकै लास्ट खुवाइ हुनेछ त्यो दिन,' उनी भावुक बने, 'त्यसपछि केटो सुधि्रएर सोझो बन्नेछ। तोङ्बा र छ्याङ छुँदा पनि छोइन्न।' उनीसँगै बसेका वसन्त राई र हिरोशिमा ठकुरीले भने सागरले पोहोर साल पनि यही प्रण गरेको बताए। 'जहिले यस्तै भन्छ यो,' हिरोशिमा बोले, 'एक हप्तापछि फेरि तान्न थालिहाल्छ।'
नयाँ वर्ष न सयाँ वर्ष
नयाँ वर्षको उल्लासले सबैलाई छोइसकेको भने रहेनछ। कतिपय व्यवसायीहरू आउने सोमवार काम गरेरै सेलब्रेट गर्ने मुडमा छन्। काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित येलु ब्युटिपार्लरकी पूजा गुरुङ नयाँ वर्षको आगमनमा खासै उत्साहित छैनन्। 'आफूलाई त जहिले पनि उस्तै,' उनी ठुस्किइन्, 'अरूलाई राम्री बनायो, पठायो। नयाँ वर्षको दिन पार्लरमा एक्लै परिन्छ यसपालि। सबै स्टाफ बिदामा छन्। फेरि, त्यही दिन दुई हुल क्लाइन्ट आउने भएका छन्। उनैलाई सिँगारेर नयाँ वर्ष मनाउनुपर्ला।'
गल्कोपाखास्थित टिनटिन गिफ्ट जोनका श्याम खड्गी पनि यसपालि पसलमै बसेर नयाँ वर्ष मनाउनेछन्। 'व्यापार राम्रो भयो भने रमाइलै हुन्छ,' उनले भने, 'नत्र धुमधुमती बसेरै नयाँ वर्ष बित्नेछ मेरो।'
गायक रेवत राई वैशाख ४ गते आफ्नो पहिलो एल्बम विमोचन गर्दैछन्। त्यसकै चटारोले उनको नयाँ वर्षे योजनालाई ढाकिदिएको छ । 'कार्यक्रम गर्न जाउँला भन्दै थिएँ,' उनले भने, 'यताको तयारी नै नसिकने भयो। अब यहीँ साथीभाइसँग भेटघाट गरेर नयाँ वर्ष मनाउनुपर्ला।'
कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजका विजयजंग कार्कीको योजना पनि यसपालि फ्लप भयो। परीक्षा आउन लागेकाले उनले नयाँ वर्ष मनाउन नपाउने भएका छन्। 'बोरै भयो नि,' उनले भने, 'नत्र क्या मोज गरिन्थ्यो। अब त जाँचका बेला नयाँ वर्ष न सयाँ वर्ष! पलेटी कसेर पढिन्छ।' पलासेका रमेशराज महतको पनि नयाँ वर्षको योजना अपूरो रहने भएको छ। भन्छन्, 'अफिसका साथीहरूसँग पोखरा जाने कुरा थियो,' उनले भने, 'गइन्नँ अब। आफूसँग पैसै भएन यसपालि।'
'ज्यान फालेर रमाइलो गरिन्छ'
मेरो घर रामेछाप हो। काठमाडौँ आएको छ/सात वर्ष भइसक्यो। पोहोर साल नयाँ वर्षका बेला गाउँ गा'थेँ। यसपालि जान पाइनँ। गाउँमा परिवार, छोराछोरीसँग रमाइलो गरेजस्तो यहाँ हुँदैन। दिनभरि रिक्सा कुदाउने र साँझ होटलमा गएर खानपिन गर्ने योजना छ हाम्रो। हामी छ/सात जना मिलेर होटल जान्छौँ। असनमा बस्ने भएकाले गल्लीपिच्छे होटल छन्, कुनमा जान्छौँ, त्यो चाहिँ टुंगो भएको छैन। राँगाको सुकुटी र छ्याङ मलाई खुब मीठो लाग्छ। म नयाँ वर्षको दिन त्यही खान्छु। होटलबाट फर्केपछि दुई किलो कुखुराको मासु, चिउरा र छ्याङ कोठामा लगेर पकाउँछौँ। 'मरिलानु के छ र? एकदिन ज्यान फालेर रमाइलो गरौँ' भनेका छन् साथीहरूले। खानपिनपछि नाचगान पनि गर्ने रे! मलाई चाहिँ नाच्न लाज लाग्छ। ताली बजाएर रमाइलो गर्नुपर्ला।
रामबहादुर मगर, रिक्साचालक
'डार्लिङ एक्टर'देखि सावधान!
चाहे पुलिसकै भूमिका होस्, राजेश हमाल किन सधैँ लामो कपालमा अभिनय गर्छन्? भुवन केसी किन सुटिङको बेला सास थामेर पेट लुकाउँछन्? रेखा थापाले फिल्ममा किन छोटो स्कर्ट लगाउँछिन्? आर्यन सिग्देल...
हरिभक्त कटुवालको एउटा प्रसिद्ध गीत छ– पोखिएर घामको झुल्का भरि सँघारमा/तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलूँ खोलूँ लाग्छ। यसमा नारायण गोपालले मनहारी स्वर भरेका छन्। प्रेमको आकाशमा कावा खाइरहेका युवा–युवती हप्तौँदेखि यही...
प्रेम दिवसमा नेपालीपनको वकालत
कस्तो संयोग, एकातर्फ नेपाली हिन्दूका घर–घरमा महादेवको प्रेममा लिप्त सती र पार्वतीको कथा वाचन हुँदैछ भने अर्कोतर्फ नवयुवाहरू आयातीत संस्कृति 'भ्यालेन्टाइन्स डे' मनाउने तरखरमा छन्। कथा, किंवदन्ती जे भने पनि...
टीका लगाएर स्क्रिनमा
धेरै वर्ष भयो दसैँमा साइतको टीका थाप्न नपाएको। प्रायः हरेक चाडबाडमा म समाचार पढ्नमै व्यस्त हुन्छु। सुरु–सुरुमा नरमाइलो लाग्थ्यो। 'आफूले गर्दा परिवारलाई अप्ठ्यारो भयो' भन्ने कुरा महसुस हुन्थ्यो। तर, अब...